Vokatra famandrihana Apple ary famolavolana ny faribolana | Avy amin'ny mac aho
Mandritra ny fotoana ela misy ny fironana handoa matetika ny serivisy, raha oharina amin'ny fividianana ity serivisy na vokatra ity. Hitanay izany amin'ny famandrihana ny serivisy fandefasana fahitalavitra, na Apple Music, ary tato ho ato amin'ny fampiasana serivisy toa ny Creative Cloud avy amin'ny Adobe na Microsoft 365.
Ity fironana amin'ny fandoavana ny famandrihana ity, izay ampiasainay rehefa liana izahay ary afaka miala amin'ny serivisy Rehefa tsy liana izahay dia mampiakatra ny fahafaha-mampiasa sy mankafy ny vokatra Apple miaraka amin'ny fandoavana sarany mifototra amin'ny sandan'ny vokatra. Araka izany, Ny orinasa dia miantoka fa hampiasa ny vokatra ataon'ny orinasa mandritra ny fotoana maharitra ianao.
Apple dia nahatsikaritra ny fihenan'ny fanambarana ny fidiram-bolany, ao anatin'ny vanim-potoana tsy misy fampisehoana vokatra. Hatreto dia manonitra an'ity fidinana ity amin'ny fivarotana serivisy, ahitantsika ny fivarotana rindranasa, fivarotana boky, sarimihetsika ary andian-tantara, ary koa ny famandrihana ny serivisy Apple Music, AppleCare ary iCloud. Ity ampahany amin'ny orinasa ity dia manana lanjany bebe kokoa hatrany, saingy tsy soloina azo antoka izy io, na dia maneho ny 13% amin'ny vola miditra aminy amin'ny 2017 aza.
Tamin'ny fanolorana ny valiny farany, Tim Cook mihitsy no nanamarika:
Eo an-dalana hahatratra ny tanjonay ny fampitomboana avo roa heny ny vola miditra amin'ny 2016 amin'ny orinasan-draharaha Services amin'ny taona 2020
Angamba ny serivisy voafaritra ho an'ny orinasa dia ny afaka manolotra fandoavam-bola isam-bolana ho an'ny vokatra Apple izay ilaintsika isan'andro.. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia afaka mahafantatra fa ohatrinona ny vidintsika raha manana ny vokatra Apple ilaina mba hanomezana fahafaham-po ny filantsika manokana sy matihanina. Inona koa, Ity hetsika ity dia ahafahan'ny, fanavaozana ny fitaovana mandeha ho azy aorian'ny fandoavana ny fifanarahana napetraka.
Saingy mandritra izany fotoana izany, ny orinasa dia hanana fitoniana amin'ny fidiram-bola ara-dalàna, izay mamela azy hahatratra ny fahamendrehana. Ity fitoniana ity dia ahafahan'izy ireo mizara loharano amin'ny faritra hafa, toy ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ny vokatra izay mbola manaitra antsika hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Vokatra famandrihana Apple sy Squaring the Circle